Mahajanga: fankalazana ny faha 57 taonan’ny fetin’ny fahaleovantena 26 jiona | Région Boeny
Ny talata 06 jiona 2017 no nampahafantarina tamin’ny fomba ofisialy, ho an’ny vahoakan’I Mahajanga ny fizotran’ny fankalazana ny faha-57 taonan’ny fahaleovantena, izay karakarain’ny Préfektoran’i Mahajanga, ny Faritra Boeny, ary ny Kaominin’i Mahajanga sy ny Foloalindahy.
Araka izany ny fandaharam-potoana mandritra ny fankalazana ny faha-57 taonan’ny fahaleovantena io toy izao:
– ny zoma 02 jiona lasa teo no nanokafana tamin’ny fomba ofisialy ny fankalazana tamin’ny alàlan’ny filaharana namakivaky ny tanàna
– ny 15 jiona 2017 ny fisokafan’ny kerimesy ny Foloalindahy izay atao eo anoloan’ny Score Mahajanga be.
– Ny 19 hatramin’ny 29 jiona ny fampiratina ny tantaram-pirenena izay karakarain’ny Foibem-paritry ny kolontsaina, hatao ao amin’ny Lapan’ny tanàna.
– Satria matso no hatao, dia hisy ny famerenana hiarahana amin’ny Foloalindahy izay atao indroa miantoana: voalohany ny 21 jiona hiarahan’ny mpianatra rehetra, ferana ho 20 na mahery kely ny mpianatra mandray anjara isan-tsekoly hoy ny Lehiben’ny Faritra Boeny. Ny faharoa dia ny zoma 23 jiona izay sady fotoana hanaovana ny fotoam-pivavahana silamo eny amin’ny Mosqué du vendredi. Amin’io andro io ihany koa no hanombohan’ny Podium eto an-tapom-tanànan’I Mahajanga. Ary araka ny tapaka eo anivon’ny komity, amin’ity taona ity ho.
-ny 24 jiona dia hisy ny diaben’ny fahaleovantena hiarahana amin’ny tompon’andraikitra samy hafa, miainga eny amin’ny Bord de la mer amin’ny 6 ora maraina, mamakivaky ny tanàna ary aorian’izay dia hisy ny fotom-pivavahan’ny Adventiste. Amin’io andro io ny fanomezana ny mari-boninahitra izay hatao eo antokontan’ny Tranoben’ny kolontsaina Mangarivotra. Amin’io andro sabotsy io ihany dia hisy ny fizaràna fanampiana ho an’ireo be antitra sy ny olona sahirana izay mitohy ny alahady 25 jiona.
-ny 25 jiona maraina no hanaovana ny fotoam-pivavahana FFKM. Ny hariva no hizaràna ireo harendrina ho an’ireo ankizy eo amin’ny Lapan’ny tanàna. Aorian’ny fizaràna dia manao diabe miaraka amin’ireo ankizy makeny amin’ny Bord de la mer izay toerana handefasana ny afomanga.
-ny 26 jiona vao maraina dia hisy ny famoamandry mamakivaky ny tanàna izay ataon’ireo manana fiara, moto, manana anjombona. Aorian’izay ny matso. Ny hariva amin’ny 3ora dia hisy ny nofon-kena mitam-pihavanana atao eny amin’ny Lapan’ny faritra ho an’ireo izay nahazo ny fanasana. Ny harivan’io andro io, mandritry ny alim-pifalian’ny daholo be, no hizaràna ny loka tamin’ireo hetsika ara-panatanjahatena manoloana ny Lapan’ny tanàna.
Ny 03 jiona hatramin’ny 25 jiona dia hisy ireo hetsika maro samy hafa ara-panatanjahantena (foot-ball, basket-ball, volley-ball, tsipy kanetibe, moraingy), sy ara-kolotsaina andravahana an’izany fankalazana izany.
Nanotrona ny Lehiben’ny Faritra tamin’ny fanambarana ity fankalazana ny fetim-pirenen’ny 26 jiona 2017 ity ny Préfet an’I Mahajanga, Atoa Ravelomahay Lahiniaina Fitiavana, ny lehiben’ny Rezimanta Miaramila faritany faha-4, ny Jly Andrianantenaina Jhonson.